नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या १० हजार नाघ्यो – BFM 91.2
June 23, 2020 June 23, 2020 Bfm	0 Comments
विराटनगर, ९ असार । नेपालमा कोरोना भाइरस (कोभिड—१९) बाट मृत्यु हुनेको संख्या २४ पुगेको छ । दैलेखका एक ४५ वर्षिय पुरुषको मृत्यु भएसँगै मृतकको संख्या २४ पुगेको हो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार दैलेखको दुल्लु ३ का ४५ वर्षका पुरुषको प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेतमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो ।
मन्त्रालय प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले उनी क्षयरोग र दमको विरामी समेत रहेको बताउनुभयो । सोमबार उनको मृत्यु भएको हो । ३ गते स्वाव संकलन गरिएकोमा असार ४ गते कोरोना पुष्टि भएको थियो । नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या १० हजार नाघेको छ ।
मन्त्रालय प्रवक्ता डा. गौतमका अनुसार मंगलबार ९० महिलासहित ५ सय ३८ जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएसँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या १० हजार ९९ पुगेको हो । मंगलबार ७६ जना गरी अहिलेसम्म २ हजार २ सय २४ जना कोरोना संक्रमित उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन् ।
अहिले ७ हजार ८ सय ५१ जना संक्रमित उपचारका लागि विभिन्न अस्पतालका आइसोलेसनमा रहेका छन् । मंगलबार पीसीआर विधिबाट ४ हजार ९ सय ९५ गरी अहिलेसम्म १ लाख ८६ हजार ३ सय ६६ जनाको पीसीआर परीक्षण भएको छ ।
यस्तै मंगलबार आरडिटी विधिबाट ३ हजार ४ सय ८१ गरी अहिलेसम्म २ लाख ७१ हजार ५ सय ८४ जनाको आरडिटी परीक्षण गरिएको छ । अहिले ८५ हजार ८ सय १३ जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन् । प्रदेश १ मा आज २० जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । १० महिला र १० पुरुषमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार मोरंगमा २, झापामा १४, सुनसरीमा ३ र ओखलढुंगामा १ जनामा संक्रमण देखिएको छ । मोरंगको विराटनगर र सुन्दरहरैचामा १–१ जनामा संक्रमण देखिएको छ ।
झापाको मेचीनगर नगरपालिकामा ३, बुद्धशान्तिमा ६, हल्दीबारीमा २, कचनकवलमा १ र विर्तामोडमा २ जना रहेका छन् । त्यसैगरि सुनसरीको धरानमा २, कोशी गाउँपालिकामा १ र ओखलढुंगामा १ जनामा कोरोना पोजेटिभ रिपोर्ट आएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.सुरेश मेहताले जानकारी दिनुभयो ।
← प्रदेश १ सरकारद्धारा कोरोनाको खर्च सार्वजनिक
लकडाउन यता १२ लाख ५५ हजार जरिवाना असुल →
November 27, 2020 November 27, 2020 Bfm	0